ကိုဆိတ်ဖွား နှင့် ELEVEN MEDIA
သာကေတမာန်ပြေ၌ ဗလီဆောက်နေသည်ဆိုသည့် သတင်းမှားကြောင့် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွား (ဆရာတော် ဦးပဏ္ဏ၀ံသ)
အစ္စလမ် စာသင်ကျောင်း ဖျက်မည့် လူစုနှင့် ရဲ ပဋိပက္ခဖြစ်…ဖမ်းဆီး အရေးယူထား သူများမရှိ
ရှင်းရှင်းပြောရရင် မလွတ်လပ်တဲ့ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ပြန်နေချင်တယ်
Boustead Atau Bastard Yang Bolehkan Ropiah Dapat RM15 juta?
Interview with Ko Htay Lwin Oo (MMCRM)
My Happiness – Motherhood and Morphine
I am not at all perturbed by the claim from various parties that they are the righteous sultan of Sulu, Borneo or Sabah. Such claims are absurd, full of craps!
Furthermore, it came decades after international delineation of states came into effect. I am more 'disturbed' by one issue - why only now that those parties put forward such claims on our territory? Its really mind boggling.
The manner in which our security personnel, both the police and armed forces, manage the intrusion of the armed 'Sulu sultanate army' more thanaweek ago, is also another stinking chapter, especially to the Home Ministry.
Some say we are being to soft and lenient to them while others described it as something to 'withdraw the attention on RCI Sabah. I reserve my comment but would like to remind the authority that those people are here to stay and to take our legitimate region.
Apart from Sultan Kiram, someone else is also claiming to be the righteous sultan of Sulu and North Borneo.
"My family is the rightful owner of the throne," said the 45-year-old Lahad Datu businessman Datu Abdul Rajak Aliuddin (pic), who has proclaimed himself as the sixth Sultan of North Borneo.
"My father Aliuddin Agas was recognised as the fifth Sultan of North Borneo.
This guy stays in Malaysia and isaMalaysian citizen but he burntaSabah flag. Imagine if the world recognises his 'kingdom'! Do we need sucha'sultan'?
If we are willing to recognise these people as the righteous of the throne, may as well we re-consider the demand by this Raja Noor Jan Shah (picture) who claims as the righteous person to the Melaka sultanate!
Remember him? He gained wide publicity about three years ago.
Are we going to recognise him as well?
(Someone did make similar claim during the 1980s... asaSultan Melaka. I forgot his name but he ownedasmall house in Cheras and rode only on his 1968 Raleigh bicycle. He passed away during the late 1970s).
Who else wants to becomeasultan? I know some 'Sutans', most of them in Penang!
Posted: 21 Feb 2013 10:04 AM PST
"Adam okey sahaja bila saya kata nak berkahwin semula dengan ibunya. Dia tidak tunjuk reaksi teruja langsung," katanya dalam nada bergurau. -petikan mstar
Posted: 21 Feb 2013 06:47 AM PST
Posted: 21 Feb 2013 03:39 AM PST
Source: StarOnline>Integrity in academia REFLECTING ON THE LAW By SHAD SALEEM FARUQI
MEMBERSHIP of the academia carries with it special responsibilities towards students, colleagues, the university, the community of which the university isapart and the scholar's own conscience.
Previously, information was created by individuals. Now information is more ofacommunal property, indicating the rise ofasort of "collective intelligence".
Academic publishing: In the growing atmosphere of "publish or perish", all academicians are required to produce original research. With this new demand, questions of research integrity come to the fore.
One way to mitigate the problem is to have elaborate rules for declaring sources of revenue and disclosing of clients' interests.
Supervisor-supervisee relationship: Around the world, research supervisors feel that beingasupervisor entitles them to put their name asalead author or co-author of their students' articles and seminar papers.
Mere supervision, direction, correction, or guidance with sources and materials does not entitleasupervisor to claim authorship of his student's work despite the undoubted time, talent and effort expended to discuss, guide and correct the student's output.
Intellectual ownership isafunction of creative contribution, not of formal relationship or status. Only those who made substantial creative contribution toaproduct are entitled to be listed as its authors or inventors for the following reasons:
> The guidanceasupervisor gives is part and parcel of his selfless, professional and ethical duty.
> Ifasupervisor partly appropriates his student's work, then the student cannot use that work in any substantial manner in his thesis as he is not the sole creator of that work.
> The supervisor descends toaconflict of interest situation. He cannot evaluate the work that is already published as partly his own!
> The university cannot awardadegree toacandidate whose work was partly produced by the university's employee!
> IfaMasters or PhD student, after graduating, filesaformal complaint against his supervisor for misappropriating the student's work (and it isamatter of time before this happens) the university may have no choice but to open investigation under Act 605 to determine who did the actual researching and composing of the work.
It must be noted, however, that authorship and ownership involve different legal considerations. A sponsored research may be written by someone but owned by the sponsor.
Also different rules may apply ifalecturer brings in the grants and enters intoacontractual relationship with students or research assistants to work under his supervision for his project.
Even in suchacase, however, ethics demand acknowledgment of the research team.
Pay to publish: Increasingly many academicians are paying to have their articles published in foreign journals that prey on our vulnerability.
Some entrepreneuring journals appoint "overseas editors" who entice aspiring people to submit articles, some of dubious quality, forafee. The fee is then shared between the editor and the journal.
University Boards must look carefully at these journals that are converting academic publishing intoalucrative business with no regard for quality or ethics.
Joint-authorship: Another questionable practice is that academicians often team up to produce joint articles in fields quite outside their competence.
If the article was multi-disciplinary, that would be commendable.
Regrettably, the situation is often this: one lecturer contributes the research model, another does the actual research. A statistician does the analysis of data. A language lecturer does the actual writing. Another team member does the footnotes. All five then share the cost of submitting the article toafee-demanding journal.
The end result is that academicians are publishing in areas quite outside their competence. University promotion Boards need to examine this clever practice.
Auditing: Research financing raises important issues of auditing and control.
Health and safety: There are environmental, health and safety considerations in most scientific research. The plan and costing of research should include provision for the remedying of harm.
Object of research: What constitutes legitimate and morally acceptable research is open to debate. One test is consequentialist. Are the consequences to society desirable?
The other test is deontological. Are the actions right or wrong on some higher criterion of morality, justice and human flourishing?
For example, shouldascholar who is researching the sex industry and who wishes to ply the streets to study the reality first hand be allowed to do so?
Copyright: There are significant issues about the authorship versus ownership of research processes and results. There are many conflicting claims. For example, ifaPhD candidate writes his thesis ataUniversity, who owns the copyright to the work – the scholar, the supervisor, the university or the scholarship giving authority?
To me, the authorship of the scholar is indisputable and must be acknowledged.
Ownership and the right to exploit the findings are issues which require detailed legal examination andadiscussion before decision.
Posted: 21 Feb 2013 04:27 AM PST
"Terima kasih banyak, begitu ramai yang hadir, menunjukkan kesedaran masyarakat India yang semakin tinggi. Ada orang kata sokongan orang India sudah berkurangan, tapi saya tak percaya sebab saya turun dan lihat sendiri," kata Anwar.
"Ini mesti ada yang cakap saya ikut budaya India pula. Saya tak takut, cakaplah saya apa pun, yang penting saya tahu saya pakai ini sebagai tanda menghormati budaya masyarakat India," kata Anwar disambut sorakan penyokong.
"Saya selalu turun dan dengar tuntutan orang India. Tapi saya nak ingatkan, kita boleh tuntut, asalkan jangan buat tuntutan macam Perkasa. Bila saya kata pendidikan percuma, maksudnya ia terpakai untuk semua rakyat Malaysia," katanya.
"Begitu juga bila saya kata hormat agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, saya kata hormat hak orang lain untuk beragama. Kalau kita main sentimen perkauman samalah kita macam Perkasa," katanya lagi.
"Sebab itu saya cakap, kami Pakatan Rakyat bersedia untuk mentadbir dengan adil kepada semua rakyat, tak kira dari segi hak, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan," kata Anwar disambut tepukan gemuruh hadirin. -KD
Posted: 21 Feb 2013 01:48 AM PST
ကိုဆိတ်ဖွား နှင့် ELEVEN MEDIA Wednesday, February 20, 2013
ယမန်နေ့ညနေပိုင်းက ဖြစ်ပါသည် Voice Of Myanmar တွင်အက်ဒမင် အလုပ် ကူညီလုပ် ကိုင်ပေးနေေ သာ ကျွန်ုပ်၏ တူတော်မောင်လေးသည် မိုးရွာကြီးထဲတွင် ရေးကြီးသုတ်ပြာ ဆိုသလိုေ ရာက် လာပြီး…
" ဆရာရေ..ခုတစ်လော ပြည်တွင်းထုတ်မီဒီယာတွေမှာ အသံအတော်စွာလာတဲ့ မီဒီယာအုပ်စုကို ပြပါဆိုရင် ELEVEN MEDIA GROUP ကိုပြရတော့မှာပါပဲ…. ၊ အစိုးရဘက်ကနည်းနည်းလေး အားနည်းချက် မပေါ် လိုက် နဲ့ ပေါ်လိုက်တာနဲ့ ELEVEN ကိုဘာမှတ်နေသလဲ ဆော်လိုက်မယ် ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ လုပ်နေတာ များနေ ပါပြီ ၊ လက်တွဲဖေါ် အခြားမီဒီယာများနှင့်လဲ အဆင်မပြေပဲ သူကလွဲရင်ကျန်တဲ့ မီဒီယာတွေ ဟာ..အစိုးရနောက်လိုက်တွေ ၊ သတ္တိမရှိတဲ့မီဒီယာတွေ ၊ သူကတော့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ တစ်ခုတည်းေ သာ မီဒီ ယာပုံစံမျိုးဖမ်းနေတာများနေပါပြီ " ဟုအဆိုင်းမတွပြောလေသည် ။
'ထိုင်စမ်းပါဦးမောင်ရင်ရာ…မင်းကြည့်ရတာ တစ်ခုခုဖြစ်လာပြီထင်တယ် ၊ ဘာတွေဖြစ်လာပြန်ပြီလဲ.. ' ဟု ကျွန်ုပ်ကေ မးသောအခါ သူက
" ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆရာရေ..ဖြစ်နေတာ ခုအစိုးရသစ်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေအတော် ခရီးေ ပါက်နေ တဲ့အချိန် ၊ ပြည်သူတွေလဲ အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အပိုင်းတွေ ရုံးလုပ်ငန်းတွေမှာ အဆင်ပြေမှုေ လးတွေစရလာတဲ့အချိန် မှာELEVEN MEDIA က အစိုးရနဲ့ ပြည်သူကိုတိုက်ပေးတဲ့ သတင်းတွေ ဆက် တိုက် ထည့်နေတယ် ၊ အစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေကြား ပဋိပက္ခကြီးသ ထက်ကြီးအောင်လုပ်နေတယ် ဆရာ. .ခုနောက် ဆုံးတော့ ဧရာဝတီပေါ့ဆရာ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးရဲ့ပြောကြား ချက်တွေထဲက အားနည်းေ နတဲ့နေရာတွေကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အယ်ဒီတာချုပ် ဝေဖြိုးတို့ ၊ စီအီးအို ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် ၊ MD ဒေါက်တာ သိန်းမြင့်တို့ဟာ လူစွမ်းကောင်းကြီးတွေလုပ်ပြီး အစိုးရကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် လာတယ် ဆရာ..အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကို စိတ်ပျက်တဲ့ အကြောင်းတွေ ပေါ်ပေါ်တင် တင် ဖေါ်ပြလာသလို အစိုးရ တာဝန် ရှိ သူတွေကို ဆဲရေးတိုင်းထွာထားတဲ့ ကော့မန့်တွေကိုတောင် သူတို့ ရဲ့ အွန်လိုင်းစာ မျက်နှာေ တွနဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာတွေမှာဖေါ်ပြပြီး မထေမဲ့မြင်ဆိုသလို လုပ်နေ တာတွေ တွေ့ရတယ် " ဟု သူ၏ စိတ်တွင် ခံစားနေရသမျကို မျက်နှာအမူအရာမျိုးစုံနှင့် ပြောလေသည် ။
"အစိုးရ ကလျော့ပေးတာေ တွများလာတော့ ငါတို့ကိုအစိုးရက ဘာမှလုပ်ရဲမှာ မဟုတ်ပါ ဘူးကွာ ဆိုပြီးေ ခါင်း ၀င် ကိုယ်ဆံ့ ဆိုသလိုလုပ်နေတယ် ၊ ရလေလိုလေ အိုတစ္ဆေတွေ လို့မောင်ရင်က ဆိုလိုချင် တာလား. .."ဟု ကျွန်ုပ် ကပြန်မေးသောအခါသူက -
" ဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့လေ… နောက်တစ်ပိုင်းက ဒါကိုကြာကြာလွှတ်ထားရင် အမှိုက်ကစပြဿဒ် မီးလောင်ဆိုသလို ပြည်သူနဲ့ အစိုးရကြားပဋိပက္ခတွေ ကြီးလာမှာသိပ်ပြီးစိုးရိမ်တာပဲ ဆရာရယ် ..၊ ဟု စိတ်မချမ်းမြေ့စွာပြောပြီးဆက်တိုက်ဆိုသလို ပင် ဆရာပဲကျွန်တော်တို့ကိုမကြာခဏ ဆိုသလိုပြောဘူး တယ်လေ…လောကကြီးမှာ Balance ဆိုတာရှိတယ် တစ်ခါတစ်လေ လောကကြီးက Balance လုပ်တာသိပ်ကြာနေရင် ကိုယ်က လောကကြီးကိုယ်စား Balance လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာလေ…
မောင်ရင့်ကို ဘယ်သူကများတားနေလို့လဲမောင်ရင်ရာ..မောင်ရင်လဲ Ph.D တွေ ဘာတွေတောင် ရပြီးနေ မှပဲ လုပ်ပေါ့ကွာ.. ဟုကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်လေ၏ ။
ဒီလိုအင်အားကြီးတဲ့မီဒီယာကြီးကို ကျွန်တော်က ဘယ်လိုတိုက်မလဲဆရာ သူတို့မှာလူအားငွေအား တစ်ပုံ တစ်ပင် သာတယ်မဟုတ်လားဆရာ…ဟု အားလျော့သည့် အမူအယာဖြင့်ပြောပြန်လေသည်..။
စစ်တိုက်တဲ့နေရာမယ် အင်အားကြီးတာငယ်တာဟာ အဓိကပေမယ့် အဓိအအကျဆုံးတော့မဟုတ်ဘူး တိုတို ရှင်းရှင်းပြောရရင် တစ်ဘက်ရန်သူရဲ့ နိုင်ကွက်ကို အချိန်ကိုက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းသည်သာလျင် ပဓာနဖြစ်တယ် … လာ..လာ ၊ ဟုပြောရင်း ကျွန်ုပ်၏ ကွန်ပြူတာရှိရာသို့ ကျွန်ုပ်၏ တူတော်မောင်ကို ခေါ်ကာ ELEVEN MEDIA ဆိုသောဖိုင်တစ်ခုက်ုဖွင့်ပြီးလျင် …History ဆိုသောဖိုဒါတစ်ခုကိုဖွင့်၍ " ဒါ. .ဒီနေ့ သိပ်နာ မည်ကြီးနေတဲ့ အလဲဗင်းမီဒီယာရဲ့ သမိုင်းကြောင်းပေါ့ကွာ..
ဒီထဲမှာ သူတို့အလဲဗင်းဟာ အရင်ထောက်လှမ်းရေး ရဲ့ထုတ်ဝေခွင့်နဲ့ ၊ မင်္ဂလာဒုံက လေ(၂) ဆို တဲ့ထောက် လှမ်းရေးတပ်နဲ့အကျိုးတူထုတ်ဝေခဲ့တာကနေစပြီး ဒီနေ့ အလဲဗင်းဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အထိ အကုန် ပါတယ် ၊ ဒီပုံက အရင်သူတို့ဘုရားလိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးက ဗိုလ်မှူး ကြီးတင် လှဆိုတာပေါ့ စစ်တိုက်တော့မယ်ဆိုရင် ရန်သူရဲ့အကြောင်းကိုသေသေချာချာသိဘို့ လိုတယ် မဟုတ်လား…"
" ဟောဒီဖိုဒါကတော့ ELEVEN ရဲ့ငွေကြေးအခြေအနေကိုဖေါ်ပြထားတဲ့ ဖိုလ်ဒါကွ. .အလဲဗင်း ရဲ့ထိပ် ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေမောက်မာမှုကြောင့် အလုပ်ထွက်လာတဲ့ ကလေးတွေဆီက ယူထား တာပါ..ဒီစာရင်း ဇယားတွေ ကိုကြည့်စမ်း စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဆိုပြီး ပြည်သူကို အသံကောင်းဟစ်နေ တဲ့မောင်ရင်တွေ ပြည်သူတွေ ဆီက အပတ်စဉ်သန်းပေါင်းများစွာ အမြတ်ယူနေတာကို ဖေါ်ပြနေတယ် ..ဒီဘက်ကဟာက အစိုးရ ကို အခွန်ဆောင်တာတွေ ..ကြည့်..ဒီအနီရောင်တွေက ကိုယ့်မှတ်ချက်တွေ ဒီမောင်တွေ အခွန် ဘယ်ေ လာက်ေ ရှာင်ထားသလဲဆိုတာ.. အစိုးရကိုဥပဒေလိုက်နာဘို့ပြောနေ တဲ့မောင်တွေက ဥပဒေ မလိုက် နာဘူး စာရင်းလိမ်တွေနဲ့ အခွန်ဆောင်နေတယ် တနည်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်ကိုညာနေတဲ့သူတွေ ၊ သူခိုးတွေ ဆိုတာဖေါ်ပြနေတယ် "
" ဒီဖိုဒါ(folder) ကတော့ အစိုးရ၀န်ကြီးတွေ ခေါင်းဆောင်တွေ ဘယ်လိုချမ်းသာပါတယ်ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ် တယ် ဆိုပြီးသူတို့ကဘဲ ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆင်းရဲနေသလိုလို ပြောနေတဲ့သူတွေ ဘယ်လောက် ချမ်းသာနေတယ်ဆိုတာဖေါ်ပြထားတဲ့ဖိုင် ဒီအထဲမှာအကုန်ပါတယ် ပါစင်နယ် နဲနဲဆန်လို့ မောင် ရင့်ကို အကုန်မပြတော့ဘူး..ဒီမှာက ဒီအလဲဗင်းမီဒီယာကလူတွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့အခြားလုပ်ငန်းတွေ နဲ့ အထောက်ထားဓါတ်ပုံတွေ ၊ ဒါကသူတို့ခလေးတွေ ဘယ်လိုနေတယ်ထိုင်တယ် ၊ ဘယ်မှာ ပညာသင် တယ်ေ ပါ့ အကုန်ပါတယ် ..ဆိုချင်တာက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးချမ်းသာနေတဲ့သူတွေထဲမှာ ဒီလူတွေ လဲ ပါတယ် သူတော်ကောင်းလုပ်နေ လို့မရဘူးဆိုတာပြောချင်တာ "
" ဒီဖိုင်ကတော့ မောင်ရင့်ကိုဖွင့်မပြတော့ဘူး..ဒီထဲမှာ မောင်ရင်ခုနပြောနေတဲ့ သန်းထွဋ်အောင်တို့ ၊ သိန်းမြင့် တို့ရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ ဘယ်လောက်ချို့ယွင်းခဲ့လဲ ၊ ချို့ယွင်းနေဆဲလဲဆိုတာကို ဖေါ်ပြနေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ပါတယ်၊ ဖေါက်ပြန်နေတဲ့ပုံတွေပါတယ် ၊ အရင်အစိုးရလက်ထက်ခေါင်းဆောင်တွေကို ရော အခု အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကောကို အစည်းဝေးတွေမှာတစ်တစ်ခွခွတုတ်ထားတဲ့ အသံဖိုင်တွေပါတယ် ၊ ထား ပါတော့ တခြား ဖိုင်တွေအများကြီးပါတယ် ..ဒီဖိုင်ဟာ ELEVEN MEDIA ကြီးတစ်ခုလုံးကို ဗုန်းဗုန်း လဲသွားစေနိုင်တယ် ..ဒါကြောင့် သူတို့မိသားစုတွေပြိုကွဲကုန်မှာ အလဲဗင်းမီဒီယာကို မှီခိုနေရတဲ့ ရာနဲ့ချီ တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး မလိုအပ်သရွေ့မသုံးဘူးလို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ် ..မလိုရင် မသုံးဘူးဆိုတာ လိုရင်တော့သုံးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့မောင်ရင်ရာ… "
ကျွန်ုပ်ပြသသည်များကိုကြည့်ပြီး အားတက်သရောဖြစ်ကာ..ဆရာရယ်.စုံလှချေလား များလှချေလားဗျာ ဘာလို့များဒီလောက်အသေးစိတ်တွေလုပ်ထားတာလဲ..သူတို့နဲ့ဆရာအာဃာတ တွေဘာတွေများရှိလို့လား ခင်ဗျာ.. ဟုမေးပြန်လေသည် ။
သူတို့နဲ့ဘာမှရန်ငြိုးရန်စတွေမရှိပါဘူးမောင်ရင်ရာ.သူတို့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်ဘို့လဲအစီအစဉ်မရှိ ပါဘူး..ဒါပေမယ့်ဒီလူတွေဟာ..တစ်နေ့ဒီလိုထောင်လွှားလာလိမ့်မယ်၊ခုလိုထိန်းမရသိမ်းမ၇တွေလုပ်လာလိမ့်မယ် ဆိုတာကျုပ်ကကြိုတွက်ထားတယ် ၊ အဲဒီအခါ တိုင်းပြည် အ တွက် လိုလာရင် သုံးရအောင် လိုရမယ်ရစုဆောင်း ထားတာပါ ..ဟုရှင်းပြရလေသည် ။သူတို့ကံဆိုး သွား တာက သူတို့အသုံးတော်ခံခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်လေးတွေထဲက တစ်ယောက်ဟာ ကျုပ်နဲ့ ရပ်ဆွေရ ပ်မျိုး ဆိုသလို ဖြစ်နေတာပါဘဲ….။
ဆရာ့လိုရမယ်ရကလဲစုံလှချေလားဗျာ…ဟု မှတ်ချက်ပြုရင်း ကျွန်တော့်ကိုဒီဖိုင်တွေပေးလိုက်ဆရာ.. ကျွန်တော်ဆော်မယ်..ဒီကောင်တွေကိုဟု ကြုံးဝါးနေသဖြင့် ကျွန်ုပ်က လက်ကာပြရင်း -
တရားသဖြင့်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာ ပြိုင်ဘက်ရန်သူကို အလစ်မဆော်ရဘူး..တရားသဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ရတယ်..
ပထမအဆင့်အနေနဲ့ သူတို့ကိုစစ်ကြေငြာရတယ် ၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုစစ်ကြေငြာပါ.. .ကြေငြာတယ်ဆိုတာကလည်းထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ပါဘူး ခုကိုယ်နဲ့မောင်ရင် ပြောနေဆိုနေ တာလေးတွေကို ဆောင်းပါးလေးလိုရေးပြီး မောင်ရင့်မေးထဲပို့ထားလိုက်မယ် ဒါလေးကို Voice Of Myanmar မှာတင်လိုက်ပါ …သူတို့ဘက်ကပြင်သွားတယ် ၊ ဆင်ခြင်သွားတယ် ဆိုရင် မောင်ရင်ကျေ နပ်လိုက်ပါ ၊ မဆင်ချင်ဘူး ရှေ့ကိုတိုးမြဲတိုးနေတယ် တင်ထားတဲ့ပို့စ်တွေ ကော့မန့်တွေပေါ်မှာ ငါတို့တော့ အစိုးရအပေါ်အသာစီးရပြီဟေ့ဆိုပြီး သာယာနေတယ်ဆိုရင်တော့ မောင်ရင်နဲ့အတူ ကျုပ်ပါ ၀င်ပြီးတိုက်မယ်….
မောင်ရင် မနက်ဖြန် TG နဲ့ပြန်မှာမဟုတ်လား အေးအေးဆေးဆေးပြန်သွားပါ ဟိုရောက်ရင် သူတို့ကို မျက်ချေ မပြတ်ကြည့်ပါ ကိုယ့်ကို ဆက်သွယ်ပါ ..စိတ်အေးအေးထားပါ လောကမှာမှန်တဲ့ဘက်က အနိုင်ရ ရမှာပေါ့ကွာ…ရှုံးလဲခဏပေါ့…ဟုပြောကာ အားပေးနှစ်သိမ့်ရလေသည် ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေ..လောလောဆယ် မီဒီယာတွေပေါ်မှာဆရာမြင်တဲ့အမြင်လေးပြောပါဦး ဆရာ ရယ် ..ဟု မေးလာပြန်သဖြင့် ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကို ပြောမနေတော့ပါဘူး ကိုယ့်စိတ်နဲ့ တစ်ထပ် တည်းကျတဲ့ အင်မတန်လေးစားထိုက်တဲ့ မဟတ္တမ ဂန္ဒီကြီးရဲ့ မီဒီယာ အပေါ်ထားတဲ့ သဘော ထားကို ပြောပြမယ် ဂန္ဒီကြီးက -
" စာနယ်ဇင်းဆိုတာ အလွန်ကြီးမားတဲ့အင်အားတစ်ခုဖြစ်တယ် ၊ အထိန်းအချုပ်မရှိ ဒလဟောသွန်၍ စီးကျ လာေ သာမြစ်ရေသည် ကျေးလက်တစ်ခွင်လုံးဖုံးလွှမ်းကာ ကောက်ပဲသီးနှံများကို ပျက်စီးစေတတ် သကဲ့သို့ အထိန်းအကွပ်မဲ့သော ကလောင်သည်လည်း ပျက်စီးမှုတို့ကိုသာ ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ် " လို့ဆိုတယ်..
ဒီတော့ အထိန်းအကွပ်မဲ့နေတဲ့ကလောင်တွေကို ထိန်းပေးကွပ်ပေးရဦးတော့မှာပေါ့ကွာ…….
Posted: 21 Feb 2013 01:37 AM PST
သာကေတမာန်ပြေ၌ အာရဗီကျောင်းသတင်းမှားကြောင့် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွား
ကျော်ဇင်ထွန်း (မြစ်မခ) by Myit Makha Mediagroup on 20 Feb, 2013
သာကေတမြို့နယ်မာန်ပြေ ၃ရပ်ကွက် ၁၈ လမ်းနှင့် ၁၉ လမ်းကြားရှိ အာရဗီဘာသာရေး စာသင် ကျောင်းအမိုးများပျက်စီးမှုအား ပြုပြင်ရာမှ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ဗလီဆောက်နေသည်ဆိုသည့် သတင်းကြောင့် အခြားမြို့နယ်များမှ ပြည်သူများက လာရောက်ပူးပေါင်းကြရာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂း ၃၀ ခန့်တွင် လူအင်အား ၁,၀၀၀ ခန့်အထိ ရောက်ရှိလာကာ ထိုအဆောက်အဦးအား ဖျက်သိမ်းပေးရန် ဆန္ဒပြကြွေးကြော် တောင်းဆို ခဲ့ကြသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ထံ တင်ပြထားသည့် ပြင်ဆင်ခွင့်နှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရာတွင် ခွင့်ပြုထားသည်ထက် ကျော်လွန်၍ ကွန်ကရစ်တိုင်များ အခိုင်အမာဆောက်လုပ်ခြင်း ၊ထုပ်၊ လျှောက်၊ ဒိုင်း၊မြားတင်ရာတွင် ဟင်ဂလန်ချောင်းများ အသုံးပြု တည်ဆောက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဘာသာရေး စာသင် ကျောင်းအစား ဗလီတည်ဆောက်သည်ဟု ရပ်ကွက်သားများက ယူဆကာ အာရဗီကျောင်း တာဝန်ခံနှင့် အချင်းများ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၈)ရက်နေ့ ဆန္ဒပြပွဲတွင် လူအုပ်ကြီးက ဇာတိမာန်ထက်သန်တက်ကြွစေသည့် သီချင်း များ သီဆိုဆန္ဒပြကြရာ အာရဗီကျောင်းအ၀င်လမ်းများဖြစ်သည့် မာန်ပြေ ၁၈ လမ်းနှင့် ၁၉ လမ်း ကို ပိတ်ဆို့ ထားသည့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးတို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဆန္ဒပြလူအုပ်မှာ ညအချိန်ထိလူစုမခွဲသဖြင့် ရွှေဝါရောင်ဆရာတော် ဦးပဏ္ဏ၀ံသဦးဆောင်သော သံဃာတော်အချို့နှင့် ဦးကိုကိုကြီး၊ ကိုဂျင်မီ၊ မနီလာသိန်း၊ မငယ်(ခ) မမီးမီး စသည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့တို့ ရောက်ရှိကာ ဆန္ဒပြလူထုအားဖြောင်းဖျပြော ဆိုခဲ့ရာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ နံနက် ၂ နာရီခန့်တွင် လူစုခွဲခဲ့ကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၉)ရက်နေ့တွင် အင်အား ၁၀၀ကျော်ရှိသည့် လူအုပ်မှာ အဖွဲ့ငယ်များ ခွဲ၍ မာန်ပြေရပ်ကွက် ၁၈ လမ်းနှင့် ၁၉ လမ်းထိပ်ရှိ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များရှေ့တွင် အကဲခတ် ကြည့်ရှုခဲ့ ကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရသည်။
အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အာရဗီကျောင်းတာဝန်ခံ ဘာသာရေး ဆရာ၏သမီးနှင့် ရပ်ကွက်အတွင်းမှ မြန်မာအမျိုးသမီးတို့ အာရဗီကျောင်း ပြင်ဆင် ဆောက်လုပ် နေသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အချင်းများကြရာမှ ပဋိပက္ခစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံအချို့က ဆိုသည်။
၄င်းအာရဗီစာသင်ကျောင်းမှာ ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က ပိတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး ကြားကာလ၌ အာဏာပိုင်အချို့မှ အဂတိလိုက်စားကာ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ် ပေးခဲ့သည့် နောက် ဒေသခံများမှ မကျေနပ်မှု စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံအချို့က ပြောကြသည်
" ဦးဇင်းတို့လည်း အစအဆုံး ထိန်းသိမ်းပေးနေတာပဲ။ သတင်းတွေကြားပြီး ရောက်လာကြတာ ဆိုတော့ မနေ့ကလာတဲ့ ပရိတ်သတ်နဲ့ ဒီနေ့လာတဲ့ ပရိတ်သတ်မတူဘူး။ ဦးဇင်းတို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်၊ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရိုက်ပုတ်ကြပြီး သွေးထွက်သံယိုဖြစ်တဲ့ အထိတော့ ရောက်မလာကြတော့ဘူးပေါ့။ ပြီးတော့ သတင်းက သတင်းမှားကြီးဖြစ်နေတယ်။ ဒီသတင်းမှားကြီးကြောင့် တဖွဲဖွဲ ရောက်လာကြတဲ့ လူတွေကို ဦးဇင်းတို့က ရှင်းပြရတယ်။ ရှင်းပြတော့လည်း ပြန်သွားကြပါတယ်။" ဟု ဆရာတော် ဦးပဏ္ဏ၀ံသက ရှင်းလင်းမိန့်ကြားသည်။
ဒေသခံအချို့ကမူ အာရဗီကျောင်း တာဝန်ခံတွင် ဗလီဆောက်မည့်ရည်ရွယ်ချက် ရှိ/မရှိ မသိရ သော်လည်း လက်ရှိပြုပြင်မှုကို အဆမတန်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်နေသဖြင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
" လမ်းတွေကတော့ မလိုတဲ့သူတွေ ဆွပေးနေတာကို ဆက်မဖြစ်အောင် ပိတ်ထားလိုက်ကြတာ။ စည်ပင်က ချိတ်ပိတ်ပြီးသွားရင်တော့ ရပ်ကွက်ကို ကြေညာသွားမှာပါ။ ဒါဆိုနှိုးဆွခံရတဲ့သူတွေလည်း သဘောပေါက်သွားကြမှာပဲ။ သဘောမပေါက်ဘဲ အဓိကရုဏ်းဖြစ်စေ ချင်တဲ့သူတွေ ဆက်ရှိနေသေးတယ် ဆိုရင်တော့ အစိုးရက ပုဒ်မ ၁၈၈ ထုတ်တော့မှာ။ ဒါဆို ဥပဒေအရ အရေးယူ ခံရမှာပဲ။ တစ်ဖက်အဖွဲ့က ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေနဲ့လည်း တွေ့ပြီးပါပြီ"ဟု ဆရာတော်က ဆက်လက်မိန့်ကြားသည်။
ဆရာတော် ဦးပဏ္ဏ၀ံသမှာ ထောင်မှထွက်လာပြီးကတည်းက မေတ္တာ Campaignဟူ၍ ဘာသာ(၄)မျိုး စုပေါင်းက စည်းလုံးရေးပွဲတော်များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဘာသာလေးမျိုးစလုံး လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိကြောင်း ကိုလည်း ဆရာတော်က ဆက်ပြောသည်။
"ဆူးလေဘုရားနဲ့ စူရတီဗလီယှဉ်ပြီးရှိနေတာကို ကြည့်ပေါ့။ အဲဒီလို Campaign ကို ပြည်သူတွေ သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးကသိအောင် လုပ်တာ။ အစွန်းရောက်သမားတွေက ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်ကို Genocide လုပ်နေတယ်ဘာညာနဲ့စွပ်စွဲနေကြတယ် မဟုတ်လား။ မူဆလင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်း တွေကလည်း ပြောပါတယ်၊ သူတို့ဘက်က Foul ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ဦးဇင်းတို့ အဆင်ပြေ သလိုလုပ်ကြပါလို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့ဘက်မှာရော ဒီဘက်မှာရော Knowledge နိမ့်တဲ့သူ တွေရှိတယ်၊ Sensitive ဖြစ်တဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ သူ့ချည်းပဲဆို ဘာသာလ၀ါ နေတာ၊ ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ Colorlessပဲ။ အဲတစ်ယောက်ယောက်က သွေးထိုးပေးလိုက်ရင် ချက်ခြင်း ပြောင်းသွားတယ်။ Knowledge နိမ့်တဲ့ သဘောပေါ့။" ဟု ဆရာတော်က ဆက်လက်မိန့်ကြားသည်။
ဆရာတော် ဦးပဏ္ဏ၀ံသက စာနယ်ဇင်းသမားများအား အာရဗီစာသင်ကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ ဦးဆောင်ခေါ်သွားပြီး " ဒကာကြီးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလှုံ့ဆော်တဲ့သူတွေက Underground ရှိတယ် ဘာညာနဲ့ပြောနေကြတယ်။ ဒါက သူတို့ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေ သိမ်းထားတဲ့ ကျင်းပါ။ Underground ဟုတ် မဟုတ်ကြည့်ပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် သတင်းက သတင်းအမှားကြီးလို့ပြောတာ။" ဟု ဆရာတော်က မိန့်ကြားရှင်းပြပါသည်။
"အခုမြင်ရတဲ့တိုင်တွေက ၂၀၀၁ခုနှစ်က ခွင့်ပြုမိန့် တင်ထားပြီးတော့ ခွင့်ပြုမိန့်ကျပြီးမှ အခုလိုပဲ ကန့်ကွက်မှုတွေရှိတော့ ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်ရုတ်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့တိုင်တွေပေါ့။ ပြဿနာ တစ်ခုဆိုတာ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် စကားများရုံနဲ့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ တစ်ဖက်ကလည်း ကန့်ကွက် တစ်ဖက်ကလည်း ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဆိုတော့ ဖြစ်ကြတာပေါ့။ ဒီနေ့စည်ပင်က လာပြီး ချိတ်ပိတ်မှာပါ။"ဟု မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
"ကျွန်တော်တို့က ရပ်ကွက်ငြိမ်းချမ်းရေးကို အထိခိုက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် လွန်လွန်ကျွံကျွံတွေ မဖြစ် အောင် ၀င်ထိန်းပေးနေတာပါ။ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ရပ်ကွက်ပဲ ထိခိုက်နစ်နာမယ်လေ။ ရပ်ကွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာလည်း တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးပဲ မဟုတ်လား။"ဟု အမျိုသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ မြို့နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ညနေ ၄ နာရီအချိန်ထိ တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့် တာဝန်ကျ လုံခြုံရေး အင်အားမှာ ၅၀ ကျော်ရှိကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရသည်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဒုတိယရဲမှူးကြီး မြင့်အေးကိုယ်တိုင် အနီးကပ်လာရောက် စစ်ဆေးကြီးကြပ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ နယ်ဇင်းသမားများက မေးမြန်းရာ တွင် ဒုတိယရဲမှူးကြီး မြင့်အေးက လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အထူးဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ဆန္ဒပြလူထုထဲတွင် မသမာသူများ လည်းပါဝင်နေသဖြင့် သည်းခံ၍ ဆောင်ရွက်နေရကြောင်း၊ လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်လျင် ရာနှုန်းပြည့််လုံခြုံရေး ဆိုသည်မှာ မရှိကြောင်း၊ လုံခြုံရေး အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ အဖြူ၊ အ၀ါ၊ လိမ္မော် စသည်ဖြင့်အရောင်များဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတိထားကြောင်း၊ လက်ရှိ လုံခြုံရေးအခြေအနေအရောင်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြန်လည် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မီတီက အဆိုပါ ပြုပြင်ဆဲ အာရဗီဘာသာရေးကျောင်း အဆောက် အဦအား ညနေ ၃း၄၅ ခန့်တွင်လာရောက် ချိတ်ပိတ်လိုက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
ရပ်ကွက်အတွင်းမှ အမည်မဖေါ်လိုသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက " ရောက်လာတဲ့လူအုပ်ကြီးက ကျွန်မတို့ရပ်ကွက်ကတော့ မဟုတ်ဘူး။ လူအုပ်ကြီးကတော့မြေလှန်ပစ်မယ်ပဲ ပြောနေကြတာ၊ ကျွန်မ တို့ ရပ်ကွက်သားတွေ အနေနဲ့ကတော့ ဗလီမဆောက်ရင်ပြီးတာပါပဲ။ စာသင်ကျောင်းလောက်ပဲဆိုရင် ဒီလောက်ပြဿနာမရှိပါဘူး။" ဟု ပြောသည်။
" အဲဒီ ဂေါပကလူကြီး (ကျောင်းတာဝန်ခံကိုဆိုလိုသည်။) က နည်းနည်းလေးကဲတာပါ။ လိုတာထက် ပိုလုပ်တော့ အခုလိုပြဿနာဖြစ်တာပေါ့။ ကျွန်မတို့ကတော့ အရှုပ်ထုပ်ထဲဝင်မပါဘူး။" ဟု ရပ်ကွက်အတွင်း နေထိုင်သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မှတ်ချက်ပြု ပြောကြား သည်။
ညနေ (၄)နာရီအချိန်ထိ ၁၈ လမ်းနှင့် ၁၉ လမ်းထိပ်အတွင်းဘက်တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ နေရာယူထားဆဲဖြစ်သလို အင်အား ၁၀၀ ကျော်ခန့်ရှိ အုပ်စုခွဲကလေးများကလည်း ပိတ်ဆို့ထားသည့် လမ်းအပြင်ဘက်မှ အတွင်းဘက်သို့ အကဲခတ်ကြည့်ရှုနေကြသည်။
အဆိုပါကိစ္စ၌ ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် အကောင်းဆုံးကြိုးစားဖြေရှင်းနေကြသူများ ရှိသလို ပြဿနာပိုမိုကြီးထွားအောင် လှုံ့ဆော်နေကြသူများလည်း ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံအချို့က ဆိုသည်။
Posted: 21 Feb 2013 01:29 AM PST
အစ္စလမ် စာသင်ကျောင်း ဖျက်မည့် လူစုနှင့် ရဲ ပဋိပက္ခဖြစ်...ဖမ်းဆီး အရေးယူထား သူများမရှိ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့ည ၁၀ နာရီကျော်က သာကေတမြို့နယ် မာန်ပြေ ၃ ရပ်ကွက် ၁၉ လမ်းအတွင်းရှိ အစ္စလမ် ဘာသာရေး ကျောင်းကို အပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းပေးရန် လူစုဝေး၍ အော်ဟစ် တောင်းဆိုကြရာမှ ရဲများနှင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုလူများသည် မာန်ပြေရပ်ကွက်မှ ဒေသခံများ မဟုတ်ကြဘဲ တခြားသော ဒေသမှ လာရောက် စုဝေး အော်ဟစ် နေသူများ ဖြစ်ကြောင်း မာန်ပြေ ၃ ရပ်ကွက် ၁၈ လမ်းတွင် နေထိုင်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တဦးက ပြောသည်။
"ဒီလို ညစဉ်ဖြစ်လာတော့ ကျနော်တို့လည်း ကြောက်လာတယ်။ ကျနော် ကြည့်ရသလောက် ကိုယ့်ရပ်ကွက်သူ၊ ရပ်ကွက် သားတွေ မပါဘူး။ ညတိုင်းလည်း အိပ်ရေးပျက်ရတယ်" ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ လူများသည် ဒေါပုံမြို့နယ်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်နှင့် ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်များမှ လာရောက် ကြသူများဟု ယူဆရကြောင်း၊ ယင်း ပဋိပက္ခကြောင့် ဖမ်းဆီး အရေးယူထား သူများမရှိကြောင်း သာကေတမြို့နယ် အမှတ် ၁ ရဲစခန်းမှ တာဝန်မှူးဖြစ်သူ ဒုရဲအုပ် စိုးဝင်းနောင်က ဧရာဝတီ၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်း မှုကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
"ရဲတွေကို ခဲနဲ့ပေါက်တယ်။ ရဲတွေက ဒိုင်းတွေနဲ့ ကာထားတော့ နည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲ ထိခဲ့တယ်။ ဒီမနက်တော့ ဘာသံမှ ထပ် မကြားသေးပါဘူး။ အဲဒီအတွက်လည်း ဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့ လောလောဆယ် ဘာမှမရှိသေးဘူး။ ရပ်ကွက်မှာတော့ အဲဒီ ရပ်ကွက်က တာဝန်ရှိသူတွေက လုံခြုံရေးအတွက် စီမံ ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ လူ ၁၀ ဦးလောက် ဖမ်းထားတယ် ဆိုတာကလည်း ကောလာဟလပါပဲ" ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
၁၉ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီကျော်မှ စတင်ပြီး လူများစုဝေးခဲ့ရာ ည ၁၀ နာရီကျော်တွင် လုံခြုံရေး တာဝန်ကျသော ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ ခဲများ၊ လေးခွများဖြင့် စတင် ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယနေ့နှင့် ဆိုလျှင် မာန်ပြေ ၁၉ လမ်း အနီးတွင် ညနေတိုင်း လူများစုဝေး၍ အော်ဟစ်နေသည်မှာ ၃ ရက်တိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကံထွန်းက ပြောသည်။
"ဒီလို လာအော်နေကြတာ ၃ ညတိုင်ပြီ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ဆူညံနေကြတာကို မခံနိုင်တော့လို့ ပရိတ်ခွေကို သူတို့ အသံဖုံးတဲ့အထိ ဖွင့်လိုက်ရာကနေ ခဲနဲ့ စပေါက်ကြတာပဲ။ လေးခွနဲ့လည်း ပစ်ကြတယ်။ လုံခြုံရေး ရဲတွေက လိုက်ဖမ်းတော့ ထွက်ပြေးကြတယ်။ ကျနော်ကလည်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖြစ်နေတော့ အဲဒီနေရာမှာ ရဲတွေနဲ့ အတူတူ ရှိနေတာ။ ဘာမှတော့ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတာ မရှိခဲ့ပါဘူး" ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ရဲများက ခြောက်လှန့်လိုက်သည့်အတွက် စုဝေးလာသည့် လူအုပ်စုသည် သာကေတမြို့နယ် ၂ တောင်ရပ်ကွက် အတွင်းရှိ အစ္စလမ် ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းကို ခဲဖြင့် သွားပေါက်ခဲ့ကြကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ရဲများနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့သူများမှာ သာကေတ ၂ တောင် ရပ်ကွက်ရှိ စားသောက်ဆိုင်၊ ပိတ်ထားသော ကွမ်းယာဆိုင်ခုံများ၊ ရွှေလမ်း ဧည့်ခန်းမနှင့် အဝတ်အစား အရောင်းဆိုင်၊ မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင် တချို့ကို ဖျက်ဆီးသွားကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ အချိန်တွင် မာန်ပြေ ၃ ရပ်ကွက်အတွင်း လမ်းအလိုက် ရပ်ကွက်သူ၊ ရပ်ကွက်သားများ မဟုတ်ဘဲ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားရာ အစ္စလမ် စာသင်ကျောင်းနား အနီးတ၀ိုက်တွင် လာရောက် ရပ်ကြည့်မှုများ မပြုလုပ်ရန် မေတ္တာရပ်ခံထားပြီး လူစုလူဝေးများ မဖြစ်ပွားအောင် စီမံဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကံထွန်းက ဆိုသည်။
ထိုအစ္စလမ် စာသင်ကျောင်းတွင် သောကြာနေ့တိုင်း အစ္စလမ်ဘာသာရေး ထုံးစံအရ ၀တ်ပြု ဆုတောင်းခြင်း ပြုလုပ်လေ့ ရှိသည်ကို တွေ့ရသည့်အတွက် ရပ်ကွက်သူ၊ ရပ်ကွက်သားများက ကန့်ကွက် နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဘာသာရေး ဗလီ ၀တ်ပြုကျောင်း အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသကဲ့သို့၊ သက်ဆိုင်ရာမှ ခွင်ပြုထားခြင်း မျိုးလည်း မရှိကြောင်း၊ ယနေ့ အချိန်တွင် မြို့နယ် စည်ပင်သာယာမှ ပြင်ဆင်ခွင့် ပြုထားသည့် အနေအထားထက် ပိုသည့် ပြင်ဆင်မှုများကို ဖျက်သိမ်း လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အဆောက်အဦး တခုလုံးကိုမူ အပြီးတိုင် ဖျက်ဆီးသွားမည် မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေမှုများသည် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းပုံစံ ဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ လူတချို့၏ လုပ်ဆောင် နေမှုများသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သာကေတမြို့နယ်တွင် အစ္စလမ်ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်း ၉ ကျောင်း ရှိသော်လည်း အားလုံးက ဗလီ ၀တ်ကျောင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲထားခြင်း မရှိကြောင်း အဆိုပါ ပဋိပက္ခ စတင်ဖြစ်ပွား ခဲ့ရသည့် မာန်ပြေ ၁၉ လမ်းမှ စာသင်ကျောင်း အမည်ပေါက် ပိုင်ရှင် အစ္စလမ် ဘာသာဝင် ဦးသန်းထွန်းက ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့က အဆိုပါ မာန်ပြေ ၁၉ လမ်းရှိ အစ္စလမ် ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းကို အကြီးစားပြင်ဆင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရပ်ကွက် ဒေသခံများက စတင်ကန့် ကွက်ရာမှ လုံခြုံရေးရဲများ လာရောက် ဖြေရှင်းရသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း နေ့စဉ်ရက်ဆက် ညနေပိုင်းများတွင် လူစုလူဝေးဖြင့် အဆိုပါ လမ်းအနီး၌ စုရုံး အော်ဟစ် တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရဲများနှင့်ပါ ပဋိပက္ခ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
"ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာ" (M-Media Blog ကဏ္ဍ)
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၊၂၀၁၃ M-Media ကျော်မိုးအောင်
ဟယ်လို … ဟယ်လို … ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ငြိမ်းချမ်းရေး???
လူကြီးမင်း ဆက်သွယ်သော တယ်လီဖုန်းမှာ
ဟယ်လို … ဟယ်လို … တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး???
ဟယ်လို … ဟယ်လို … ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူလက်တွဲနေထိုင်ရေး???
ဟယ်လို … ဟယ်လို … လူ့အခွင့်အရေး???
ဟယ်လို … ဟယ်လို … လူကိုလူလိုမြင်ရေး???
ဟယ်လို … ဟယ်လို … ဘက်မလိုက်သော/ နှာမစေးသော ခေါင်းဆောင်ကောင်း???
ဟယ်လို … ဟယ်လို … ကော်မရှင် အစီအရင်ခံစာ???
ဟယ်လို … ဟယ်လို … အပြန်အလှန် ပုတ်ခပ်စော်ကားမှုပပြောက်ရေး???
ဟယ်လို … ဟယ်လို … ဝါဒမှိုင်းတိုက် အဆိပ်ခပ်စာပေ မီဒီယာ ပပြောက်ကင်းစင်ရေး???
ဟယ်လို … ဟယ်လို … ကိုယ်ချင်းစာတရား???
ဟယ်လို … ဟယ်လို … အမုန်းမိစ္ဆာ အမြင်ဆိုး တိမ်သလ္လာ ကင်းစင်ရေး???
ဟယ်လို … ဟယ်လို … အမြင်ကျယ်စေမည့် လူဆန်စေမည့် ပညာရေး???
Posted: 21 Feb 2013 12:36 AM PST
Posted: 20 Feb 2013 11:13 PM PST
Source FB of တကျော့ပြန် ဟန်းဒရစ်
ရှင်းရှင်းပြောရရင် မလွတ်လပ်တဲ့ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ပြန်နေချင်တယ်။
သူ့ဘာသာ ဘယ်လို အုပ်ချုပ် အုပ်ချုပ် သူ့ခုံကို ထိပြီး ဆူပူမှုလုပ်ရင် တစ်ယောက်မှ ချမ်းသာမပေးဘဲ နှိပ်ကွပ်တယ်။
ဘာလဲ ဒီမိုကရေစီ (အယောင်ဆောင်) ရတာတောင် ဒီလောက် သူတပါးကိုးကွယ်ရာကို မိုက်ရိုင်းစော်ကားနေတာ ဒီမိုရေစီဆိုတာ လွတ်လပ်စွာ စော်ကားခွင့် အကြမ်းဖက်ခွင့်လားလို့တောင် ထင်မိတယ်။
စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ E ချီးတောင် ကျယ်ကျယ်မပေါက်ရဲတဲ့လူတွေ ဘောင်းဘီချွတ်အစိုးရလက်ထက်ရောက်တော့ သူတပါး အိမ်ဦးခန်းတတ်ပြီး ချီးပါဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်။
ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေ လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေက မိမိကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမ ဘောင်အပြင်ရောက်နေတာတောင် ပြောဆိုဆုံးမမယ့်လူမရှိဘူး။
မကြေလည်တာတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ စဉ်းစားမယ်မရှိဘူး ရှေ့ကစပြီး အူရင် နောက်က တန်းစီပြီး အူဖို့ကအဆင်သင့်။ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ သင့်တော်၏ မသင့်တော်၏ မဆုံးဖြတ်ဘဲ မိမိကိုယ်ကို ပညာတတ်လို့ ကြေငြာထားတဲ့ ပုဇွန်ဦးနှောက်နဲ့ လူတန်းစားတစ်စုကပါ စော်ကားနေကြတယ်။
ဒီလိုရေးရင်းနဲ့လည်း ကိုယ်နဲ့ ရင်ဘတ်ခြင်းတူတဲ့ ဘာသာခြား မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း အားနာလာတယ်။ အမြဲတမ်း မဟုတ်မဟတ် စော်ကားခံနေရတဲ့ လူတစ်စုအတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောခွင့်ရှိတာ ဒီနေရာမို့လို့ ရေးရ ပြရတာပါ။ မဟုတ်မဟတ်တဲ့ စာတွေဖတ်လိုက်ရရင် ရင်ဝကို စောင့်ကန်တာထပ် ပိုခံစားရတယ်။
ဘာလဲမြေအောက်ခန်း ဘယ်မှာလဲ စစ်စခန်း ဘယ်သူလဲ ?
What's behind names? Events? Celebrity deaths? Ever thought there was more than meets the eye?
Subtlety and discretion is vital so I rest my case. I am posting this to share information and not to insult of offend anyone.
CLICK HERE foravery basic introduction to the mystery behind all mysteries.
Posted: 21 Feb 2013 01:23 AM PST
Urusniaga tersembunyi Boustead bolehkan Ropiah dapat RM15 juta.
PETALING JAYA 20 FEB: Kementerian Pertahanan menganugerahkan kontrak tambahan kepada Awan Megah Sdn Bhd (AMSB), milik Ketua Wanita Umno Selangor, Raja Ropiah Abdullah melalui satu surat lantikan bertarikh 26 Jun 2012.
Pengarah Strategi KEADILAN, Rafizi Ramli mendedahkan, urusniaga tersebut disembunyikan dari pengetahuan umum dan pemegang saham lain kerana tidak difailkan kepada Bursa Malaysia.
"Kementerian Pertahanan menganugerahkan kontrak tambahan sebanyak RM15,054,408 kepada AMSB, selain dari pembayaran RM130 juta yang pernah diumumkan sebelum ini," katanya pada sidang media di Ibu Pejabat KEADILAN, petang ini.
Justeru menurut Rafizi, tindakan tersebut bercanggah dengan syarat peruntukan dalam perjanjian yang secara automatik menyebabkannya terbatal.
"Urusniaga ini dirancang dan dimeterai dengan satu tujuan, iaitu memberi durian runtuh kepada Raja Ropiah," jelas Rafizi memaklumkan, sebagai pemegang saham minoriti, beliau akan berbincang dengan peguam untuk membawa kes tersebut ke mahkamah.
"Walaupun sudah dibayar RM130 juta atas alasan mengembalikan tanah-tanah kepada anak syarikat LTAT, sebenarnya hanya 200 ekar dari keseluruhan 223.3 ekar yang akan dipindahkan kepada Bakti Wira Sdn Bhd," dedah Rafizi lagi.
Tambahnya, perjanjian secara jelas menegaskan, 23.2 ekar tanah kekal dalam tangan Raja Ropiah, yang dijangka mencecah RM400 juta dan sekiranya pembangunan bercampur dilakukan, ia bakal mencecah nilaian RM1.5 bilion. -KD
Urusniaga LTAT beri durian runtuh kepada Raja Ropiaah, kata Rafizi PETALING JAYA, 20 Feb — Senator Datuk Raja Ropiaah Abdullah menerima jutaan ringgit lebih dari klausa tersembunyi dalam rancangan kerajaan persekutuan membeli tanah di Bukit Raja, kata Rafizi Ramli hari ini.
Pengarah strategi PKR itu pagi tadi dibenarkan menyemak dokumen perjanjian tanah dan mengkaji saham Boustead Holdings Bhd selepas beliau membeli saham firma tersebut.
"Saya terperanjat kerana apabila kita semak klausa itu satu per satu, sebenarnya ada banyak lagi penyelewengan yang dilindungi dari pengetahuan orang ramai dan pemilik saham," kata Rafizi dalam sidang medianya hari ini.
"Raja Ropiaah menerima keuntungan berjuta ringgit atas angin."
Boustead, syarikat yang dilaburkan oleh tabung kerajaan Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) mengumumkan tahun lalu membeli 80 peratus saham syarikat Deepak Jaikishan, Astacanggih Sdn Bhd, dan sebidang tanah bernilai RM130 juta milik Awan Megah Sdn Bhd, syarikat ketua wanita Umno Selangor Senator Datuk Raja Ropiaah Abdullah.
Selain dari RM130 juta yang diumumkan sebelum ini, Kementerian Pertahanan menganugerahkan syarikat Raja Ropiaah Awan Megah Sdn Bhd RM15 juta dalam kontrak tambahan pada 26 Jun 2012.
Awan Megah juga menerima 23.2 ekar tanah dari asal 223.2 ekar, yang berpotensi bernilai jutaan ringgit.
Sejumlah RM4 juta juga diberikan kepada Boustead kepada proksi bernama Putra Nazrain Abdul Jalil untuk membeli 20 peratus saham Astacanggih Sdn Bhd yang dimiliki peniaga permaidani kontroversi Deepak Jaikishan.
Anak syarikat Boustead, Bakti Wira Sdn Bhd mengambil alih semua komitment Awan Megah kepada syarikat pembuat plastik GuppyUnip Sdn Bhd untuk membatalkan perjanjian sebelum ini.
Dalam perjanjian sebelum ini, Awan Megah bersetuju untuk bekerjasama dengan GuppyUnip, dan pemberian kredit diberikan oleh United Overseas Bank (UOB) kepada GuppyUnip untuk membiayai modal Awan Megah berjumlah RM59.25, premium untuk perpindahan nama tanah dari kerajaan Selangor dan kos penyediaan pembangunan kawasan tersebut.
Dalam dokumen tersebut, ia juga dipersetujui Deepak tidak akan membuat sebarang kenyataan tanpa kebenaran Boustead.
"Ini membuktikan dakwaan saya bahawa perjanjian ini hanya mahu mendiamkan Deepak," kata Rafizi yang membuat dakwaan tahun lalu sekiranya tuduhan dibuat oleh Deepak ke atas pembunuhan model Mongolia Altantuya Shaariibuu tidak dianggap serius, tidak sekali-kali LTAT akan membuat perjanjian itu.
Beliau mengulangi bahawa beliau "tidak sabar dan bersedia" menghadapi Menteri Pertahanan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di mahkamah selepas kes saman di Mahkamah Tinggi bulan lalu, Rafizi menegaskan Ahmad Zahid belum lagi berhadapan dengannya dengan sebarang kes mahkamah.
Pengarah strategi PKR itu berjanji akan mendedahkan lebih banyak lagi perjanjian sejak beliau mendapat banyak maklumat dari lawatan beliau ke Boustead.
"Pasti akan seronok menjelang pilihan raya ini," katanya lagi, bergurau. -TMI
Posted: 20 Feb 2013 10:46 PM PST
Posted: 20 Feb 2013 09:51 PM PST
By Harry Roque From the Philippine Daily Inquirer
Initially, we could not make heads or tails over media reports that around 300 armed men from the Philippines had landed in Sabah. In fact, it tookanumber of days before we realized that the men were calling attention anew to the "elephant in the room" in the precarious bilateral relations between Malaysia and the Philippines.
When I discussed the Sabah issue inaconference in Kuala Lumpur last December presided over by former Malaysian Prime Minister Abdullah Badawi,aMalaysian career diplomat turned red and assailed me for resurrecting what he claims to be "a long-settled issue." According to this Malaysian diplomat, he was present when the dictator Ferdinand E. Marcos unequivocally declared in 1977 that the Philippines "had abandoned its claim to Sabah." Arturo Tolentino, then minister of foreign affairs, allegedly reiterated this position.
It was notasurprise then that in the 1990s, Malaysia vehemently objected to the Philippines' attempt to intervene inacase with the International Court of Justice (ICJ) on the issue of conflicting claims to territory on Pulau Sipadan and Pulau Ligitan between Malaysia and Indonesia. There, the counsel for Malaysia, Sir Elihu Lauterpacht, my own mentor in international law, argued that while we claimalegal interest in some of the primary documents to be presented in the case to prove our title to Sabah, the reality is that there is no pending Philippine claim to Sabah, citing anew the Marcos and Tolentino declarations.
The Sabah issue would hence be relegated to the back of our consciousness. In the words ofasenior Filipino diplomat, the Sabah claim "remains unsettled but had been relegated to the back burner given the importance of our bilateral relationship with Malaysia." The latter has, after all, taken on the sensitive role of facilitator in the ongoing peace talks in Mindanao. Ironically, the same Filipino diplomat deplored Malaysia's role in the peace talks, saying it is notadisinterested party precisely because of the unresolved Sabah claim. Many believe that the claim to Sabah, together with the notorious 1968 Jabidah massacre, or the killing of soldiers who were then being trained in Corregidor foraplanned military invasion of Sabah, has prompted Malaysia to stoke the embers of the insurgency groups in Mindanao. Some have even claimed that even recently, Malaysian submarines were utilized to deliver arms to armed insurgents in Mindanao.
There is not much dispute on what the Sabah claim is other than for one word: "pajak." It is undisputed, for instance, that the Sultanate of Brunei cededabig chunk of Sabah to the Sultanate of Sulu asatoken of its gratitude for the latter's role in quelling an armed rebellion in Brunei. It is also undisputed that in 1878, the Kiram family of Sulu, with Gustavo von de Overbeck of the British North Borneo Co., entered intoacontract for pajak. English and, later, Malaysian authorities would construe pajak asacontract of "sale." The Philippines maintains it is one of "lease."
It is also undisputed that "estoppel" isarecognized mode of losing title to territory. This was the ruling of the ICJ in the "Temple case of Preah Villar," then being disputed between Cambodia and Thailand. The ICJ ruled that because Thailand signeda1933 map indicating the temple to be in Cambodian territory, Thailand was estopped from claiming title to the temple. Our dilemma now is while the Malaysians insist that we are estopped from assertingaclaim to Sabah because of the Marcos and Tolentino declarations, what happens to the rights of the Sultanate of Sulu? Malaysia itself admits the execution and authenticity of this contract entered into by the Sultanate of Sulu with Overbeck as in fact; it used the same as its basis of title over Sabah in the case decided upon by the ICJ. The issue now is: What exactly is this contract of pajak and what should be done now that its rightful owners want Sabah back?
In any case, even the Malaysians themselves have questioned whether the Marcos and Tolentino declarations will suffice to extinguish our claim to Sabah. They have demanded that in addition to the declarations, the renunciation should be done throughaconstitutional amendment. The rationale for this is that Sabah is included in the definition of our national territory in both the 1935 and the 1987 Constitutions. The proceedings of both Constitutions will show that the intent of the drafters was to include Sabah as part of "territory over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction."
The arrival of the armed men in Sabah sends the message that the Sultanate of Sulu wants its property back. This would mean that while we may not assertasuperior claim to the territory during the pendency of the Sabah lease, our nationals, claiming to be its owners, now want their property back. It is incumbent on President Aquino's administration to espouse the claims of the sultanate. Certainly, Article 1 of the 1987 Constitution on the National Territory mandates this.
Harry Roque is the director of the UP Law Center's Institute of International Legal Studies.
Posted: 20 Feb 2013 09:45 PM PST
Posted: 20 Feb 2013 08:28 PM PST
Posted: 20 Feb 2013 08:19 PM PST
It is lunchtime at the office and I wanna take 15 minutes to jot down something in the blog. About my happiness. Up until 12.20pm today.. I hope nothing crappy will ruin it later on!hehe
First – my work. We had the Board meeting this morning, and the management listed my achievement as one of the highlighted success for year 2012. 3mil target and 16.7mil was achieved by my department. And that department consists of only me! One woman show yo! I am happy! Yeah!
Two – I drove Rafa to the babysitter's house this morning. Usually Azman sends him and I send Miki to school but because I was going early to prepare for the Board meeting, we switched anak. Hehe. And while driving with Rafa gogo gaga in his car seat by my side, I felt this thing that I think people call happy. In my heart. With no absolute reason. Then I looked at Rafa and I realized that he is one rich source of happy for me. Like an oil reserve that could support global petroleum demand for the next million years – that kind of rich! And he doesn't have to do anthing. He just sat there and play withaplastic toy and said "gaa gaa ateh ateh ateh gaaa gaa atehhh.." and he made me darn happy!
Three – Way back before I left the house, Miki was up so easily. He showered and while he was brushing his teeth, hurriedly I told him today Daddy was going to send him and I needed to go NOW cause I haveameeting at work. I said bye baby I love you and by the time I was reversing my car out of the porch, I saw him standing at the door fully dressed in his school uniform. I wanted to stick my head out of the car and scream "Mummy loves you, Miki!" but I was really inahurry… Oh, He is so handsome, my son Miki and he has gone so big and clever. I love him so much. And how easy he can please me just stand there dressed nicely for school without me telling him, and I now I feel so happy I want to buy him that 500 bucks LEGO set he wanted.
Gosh.. Motherhood I am telling you, is one hellova strong morphine…
Below isavideo of my "oil reserves" goofing around before bed. Miki still hasabottle before bed, and he likes to tayang-tayang botol susu tu kat Rafa knowing Rafa akan tergedik-gedik nak jugak… Haha…
Posted: 20 Feb 2013 08:15 PM PST
Semalam seharian di Pulau Pinang, beberapa aktiviti telah berlangsung termasuklah taklimat penerangan dan pengagihan bahan 'perang' kepada seluruh komrad di Pulau Pinang dan juga organisasi anak muda yang bersama ingin bersama mengekal rentak kemenangan Pakatan Rakyat di P.Pinang. Satu pertemuan anak muda juga berlangsung di sebuah restoran cina islam di Bayan Baru, P.Pinang pada lewat petang.
Laungan "Amaran: Tipu PRU rakyat bangkit humban kamu" bergema di Pulau Pinang dan menjadi pedoman untuk rakyat bersedia tanpa arahan untuk bertindak dalam tempoh 48 jam jika penipuan pilihanraya tetap berlaku.
Hari ini, merupakan hari ke-4 Roadshow #AmaranPRU di utara akan berlangsung di Perak, menjadi medan terakhir fasa pertama jelajah yang membangkit keberanian rakyat. Venue jelajah di Perak telah bertukar sebanyak tiga kali, dari Teluk Sarih ke Kg Bukit Chawi, tukar pula ke MTD PAS Kg Gajah setelah pemilik tanah dua tempat terawal diugut dan ditekan oleh pemerintah 'haram' negeri Perak.
Ayuh hadir malam ini di MTD Kg Gajah dan dapatkan T-shirt khas yang dikeluarkan sempena Roadshow #AmaranPRU. Tshirt yang diperkenalkan SAMM dijual bagaikan 'pisang panas' dengan harga hanya RM10 sehelai (dengan kualiti baik) dan dengan harga RM10 ini hanya boleh didapati dalam Roadshow #AmaranPRU sahaja.
Ayuh hadir malam ini demi memeriahkan gerakan anak muda dan memartabatkan demokrasi dalam negara dengan satu AMARAN iaitu "Jika Tipu PRU, Rakyat Bangkit Humban Kamu!!". Ini adalah kemuncak untuk fasa pertama jelajah SAMM-ABU, InshaAllah fasa kedua Roadshow #AmaranPRU akan dilancarkan menemui semua di seluruh negara dalam masa terdekat.